မှူးဒါရီ: Taggggggggggg ဆိုတဲ့ ဆားတစ်ခွက်
Taggggggggggg ဆိုတဲ့ ဆားတစ်ခွက်
အလုပ်သွားဖို့ စိုင်းပြင်းနေတုန်း ဂျီတော့မှာပေါ့...ချစ်စဖွယ် အလွန်ကောင်းသော၊ အားတိုင်း ဘလော့ဂ်တစ်ကာ လျှောက်သွားနေသော (ခြေမညောင်းတိုင်းး) ၊ ဘလော့ဂ်နောက်ခံ templateများကို ခဏခဏ ပြောင်းတတ်သော (ပိုက်ဆံ မကုန်တိုင်းးး) ....ဘလော့ဂ်ဂါ မောင်ငယ်က ဟောဒီလို လာအော်ပါရော....။
“ဟေး ဟေး (ကိုရင်ညိန်းထံမှ ကူးစက်လာသည်ဟုထင်ရသော ရယ်ပုံရယ်နည်းးဖြင့် :P ) ငါ့အစ်မ အတက်ခ် ခံရပြီ။”
“ဟီးး ကောင်းလိုက်တာ” တဲ့
ပြောရုံနှင့် အားမရလို့ ထင်ပ။ ဒီမှာ ဆိုပြီး တက်ခ်ထားတဲ့ blackdream ကြီးရဲ့  စာသားတစ်ချို့ ကို ဗုန်းထဲမှာ လာချသွားတယ်...။
အင်း မောင်မင်းကြီးသားရေ... ကျေးဇူးပါနော်...ဟွန်းးး (သူ tag မခံရတိုင်းးးး :( ) တွေ့မယ်..။
မြင်မြင်နေတာတော့ ကြာပြီ။ အဲဒီလို tag နေကျတာကို...။အော် ဘာသိဘာသာပါပဲ။ ကိုယ်နဲ့ ဘာဆိုင်လိုက်တာ မှတ်လို့ ဆိုပြီးးး။ ခုတော့ မောင်blackdream က သူဘာသာ ၁၁မီးငြိမ်းချင်တာနဲ့ပဲ ၊ မှူးကို မီးတစ်မီး လုပ်ပစ်လိုက်ရတယ်လို့...။ မဆီမဆိုင်...။
ပထမတော့ မရေးတော့ဘူးလို့ ပေါ့နော်...။ ဒါပေမယ့် ပိုစ့်အသစ်တင်ဖို့ လည်း ကုန်ကြမ်းနည်းနည်း ရှားပါးခိုက်ဆိုတော့ မထူးဇာတ်ခင်း ဆားချက်လိုက်ပါတယ်။ ရမ်းသမ်း မှန်းသမ်း သိသလို ပြန်ဖြေထားတာ ကျုတ်ကျက်လိ ကြည့်ကျက်လုပ် ဖတ် သွား ကြ ပါ လို့....................။ ^_^
ကိုယ့်ကိုသူငယ်ချင်းတွေကဒီလိုခေါ်တယ် ………… မှူး ၊ မှူးကြီး မတ်ရာ၊ တူးချာရီ :P
ကိုယ်ဒီမှာနေတယ်………… ရေတွေ ပတ်လည်ဝိုင်းရံထားသော ကုန်းမြေ...။
ကိုယ့်ဆီဖုန်းဆက်ချင်ရင်………… ဖုန်း နံပါတ် လာတောင်းးး ဟီး :D (မှတ်ချက်=တောင်းတိုင်းလည်း မပေးပါ...။)
အရောင်ဆိုရင်………… အဖြူ နဲ့ အစိမ်း....။
အစားအစာဆိုရင်………… ဗိုက်ပြည့်ဖို့ သာ အဓိက...။
ပစ္စည်းဆိုရင်………… နာရီ ၊ မျက်မှန် နဲ့ ဗလာစာအုပ်။
သီချင်းဆိုရင်………… နားနဲ့ နားထောင်ပြီး ရင်ဘတ်နှင့် ခံစားလို့ရသမျှ...။
စာရေးဆရာ………… စာရေးခြင်းဖြင့် အသက်မွေးသော ဆရာများ.....။
စာအုပ်………… ဖတ်ရမှာ ပျင်းတယ်။
Life style………… စတိုင်ကျအောင် လုံးပမ်းနေတဲ့ ဘ၀...။ :P
ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာ………… လူတကာရဲ့  ၀ါသနာကို စူးစမ်းတတ်ခြင်း..။
အလိုချင်ဆုံးလက်ဆောင်………… လိုချင်တဲ့ အချိန်၊ လိုအပ်တဲ့ အရာ ကို ကိုယ်လိုလားတဲ့သူက ပေးခြင်း....။
ကိုယ့်ရဲ့ အချစ်ဆုံးသူက………… အမေ...။
ကိုယ့်ရဲ့ အလေးစားဆုံးသူက………… ကော်ဖီ ပင် စ စိုက်ခဲ့တဲ့သူ.........( သိရင် ပြောပြကြပါအုံးးး)း)
ကိုယ့်ရဲ့ အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းက………… တော့တိုးချန်...။
ကိုယ့်ကို အများဆုံးနားလည်မှုပေးနိုင်သူက………… ဘယ်သူလဲဟင်? ( တိုးတိုးလေး လာပြောပြနော်....:P )
ကိုယ့်ရဲ့ အမုန်းဆုံးသူက………… ကိုယ့်ထမင်းကိုယ် စားပြီး မမှန်သတင်း အတင်းတုပ်တဲ့သူ...။
ရင်အခုန်ဆုံးအချိန်………… သရဲ ခြောက်ခံရတုန်းက...။ :D
အကြောက်ဆုံးအချိန်………… ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒ နှင့် ဖြစ်သင့်တာ ထပ်ထူမကျချိန်တိုင်း...။
အပျော်ဆုံးအချိန်………… လုပ်ချင်ရာ လုပ်နေရရင်...။
အမှတ်တရနေ့………… တိုင်း အမှတ်ရချင် စရာ မကောင်းဘူး...။
ဆုတောင်းတိုင်းသာပြည့်မယ်ဆိုရင်တောင်းမယ့်ဆု………… တောင်းတဲ့ဆုတိုင်း ပြည့်ဝပါစေ...ဟဲ ဟဲ..။
အချစ်ဆိုတာ………… အ တဲ့ သူတွေ ချစ် ကြတဲ့...။
အမုန်းဆိုတာ………… သိမ်းမထားသင့်တဲ့ မီးကြွင်းမီးကျန်...။
အလွမ်းဆိုတာ………… ကဗျာရေးဖြစ်ခြင်း အစ...ပထမ..။
သံယောဇဉ်ဆိုတာ………… သံသရာရှည်စေတဲ့ အတုပ်အနှောင်..။
ဘ၀ဆိုတာ………… ရှင်သန်ရန် မွေးဖွားလာခြင်း..။ မွေးဖွားခြင်းကြောင့် မရှင်သန်သင့်တဲ့ နေရာ...။
သူငယ်ချင်းဆိုတာ………… ဒုတိယ အသက်...။
ချစ်သူဆိုတာ………… ရည်းစား မဟုတ်ဘူးပေါ့...။ :P
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဒီလိုထင်တယ်………… ဇာတ်စင် ပေါ်က သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်....။
ကိုယ့်ရဲ့လက်ဆွဲဆောင်ပုဒ်က………….... အားလုံး အဆင်ပြေသွားမှာပါ..။
အပြောချင်ဆုံးစကားတစ်ခွန်း………… လ နှစ်ချောင်းငင် ( --ူ) လူ ပီသအောင် ကြိုးပမ်းနေတုန်းပါပဲ...။
ဟုတ်ကဲ့ရှင် ကိုယ့်အလှည့် ပြီးသွားတဲ့ နောက်မှာတော့ သူ့များတွေ အလှည့်ပေါ့နော်...။ အလှည့်ကျရင် မနွဲ့ စတမ်းပေါ့....။ သိတဲ့တိုင်း ခင်မင်သူကလည်း ခပ်ရှားရှားဆိုတော့ သိတဲ့ လူကိုပဲ တက်ခ်ရမှာပဲ...။ သိတယ်ဟုတ်... :D
၁) မောင်ငယ် (ကာရံမဲ့ ရင်ခွင်၏ ရင်ကြွင်းဒဏ်)
၂) ကိုဖုန်းမြင့် (လွမ်းရိပ်မြုံ )
စာကြွင်း။ ။ ဖြေလိုက ဖြေနိုင်သည်။ မဖြေလိုက မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်နေလည်း ရပါသည်။ စိတ်မဆိုးတတ်ပါ။
(ဂျီတော့မှာ မြင်လျှင်တော့ ခဏခဏ ဂျီကျပါမည်..။) ^_^
Posted by Mhu Darye at 12:03 AM
သူများကို မကောင်းကြံတာလည်း မဟုတ်ပါဘူးဗျာ ...
၀မ်းသာအားရ ပြောပြတာလေးတစ်ခုပါ ..:D
အခုတော့ဗျာ ကြည့်ပါဦး သတင်းပေးသူကိုပါ မညှာမတာ..
အဲဒီကိစ္စ ၀မ်းသာအားရစရာ ဘာပါလို့တုန်းးးး
ကဲပါ ဒီလောက် သတင်းပေးချင်နေရင်၊ ကျမ တက်ခ်ထားလေး အမှန်တိုင်းပြန်ဖြေပေါ့...။ ဟုတ်ပလား?? ^_^အလှည့်ကျ မနွဲ့ စတမ်းပေါ့..အဟဲ
အို ....အသင် လောက.. လောက၌ ခင်မင်ချင်ယောင် ဆောင်၍ ချောက်တွန်း တတ်သူများ ရှိပါပေသည်တကားးးးး...။
ငှဲ ငှဲ ငှဲ...။ လိမ္မာတယ် :P
အဖြုနဲ့အစိမ်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့ ကျောင်းတက်ချင်သေးလိူ့ လား မှူးဒါရီ :)